Axkaamta Timaha, Shaarubta, Gadhka, Cirrada iwm | Gaaldiid
Axkaamta Timaha, Shaarubta, Gadhka, Cirrada iwm
Bogga Hore > Salaada, Waysada iyo isdaahirinta > Axkaamta Timaha, Shaarubta, Gadhka, Cirrada iwm
Waa maxay is nadiifinta Fidrada ah?
Waxa weeyey kuwan ku soo arooray Xadiiska Nabiga (N.N.K.H) wuxuu yidhi: Shan ayaa fidrada kamid ah, in la xiiro timaha cawrada, gudniinka, shaarubta oo la gaabiyo, timaha kilkilada oo la gooyo, iyo cidiyaha oo la jaro.
Goormaa la fulinayaa arrimahaas?
Wuxuu sidaas samaynayaa Todobaadkasta, sida uu Baqawi musnadkiisa kusoo saaray, waxaana warinaya xadiiska Cabdilaahi ibnu Camru ibnu Al-caas: Nabigu wuxuu gaabin jiray shaarubtiisa iyo cidiyihiisa maalinkasata oo Jimce ah, wuxuuna nici jiray inuu ka tago wax ka badan afartan casho. Sidoo kale Anas wuxuu warinayaa: Wuxuu noo xadiday Nabigu inaan shaarubta gaabino, cidiyaha jarno, kilkilada timaha oon googayno iyo inaan timaha cawrada jarno inaanaan ka tagin wax ka badan afartan casho.
Waa maxay xukunka in timaha Gadhka la xiiro ama shaarubaha oo la daysto?
Xukunkeedu waa xaaraan waxaana u daliila xadiiska Nabiga (N.N.K.H) uu warinayo ibnu Cumar (I.R.H) wuxuu yidhi: Nabigu wuxuu dhahay: Gaalada khilaafa, gadhkana sii daayaa, shaarubtana gaabiya
Waa maxay xukunka Foodu, timaha madaxa oo badhna la xiiro badhna la daysto?
Xukunkeedu waa karaahiyo, waxaana u daliila xadiiska Nabiga ee uu warinayo Ibnu Cumar: wuxuu yidhi: Waxaan maqlay Nabiga oo reebay Qasciga, Qasciguna waxa weeye Timaha oo badhna la xiiro badh kalena la daayo (food dhuub)
Waa maxay xukunka Cirrada oo la jaro, ama la badalo? Maxaase u daliila?
Timaha Cirrada oo dabar gooyo waa karaahiyo, in midabkeedana lagu badalo midab Madaw ahna ma banaana. Wuxuu dhahay Nabigu: Ha googoynina Cirrada maxaa yeelay Muslimka waa u nuur, Ruux muslim ah ma jiro oo ku cirreysta Islaamka haduuba jiraba Allah ayaa xasano u qora, darajana sare ugu qaada danbina kaga dhaafa. Sidoo kale waxa Kacab ibnu Murrah laga wariyey in Rasuulkii Ilaahay (S.W.T) yidhi: Cidii ku cirreysata ISlaamka waxay u tahay Nuur maalinta Qayaame.
Waxa kale oo u daliila inay karaahiyo tahay in Cirrada lagu badalo Madaw xadiiska Jaabir ibnu Cabdillaahi wuxuu yidhi: Waxa loo keenay RAsuulkii Ilaahay (N.N.K.H) Abuquxaafa (Abubakar aabihii) maalintii Makkah la furtay, isagoo timihiisu cadyihiin, markaasu RAsuulku dhahay: u geeyey qaar kamid ah haweenkiisa, oo haku badaleen wax kana fogeeya Madaga. Laakiin hadii Cirrada lagu badalo xinne ama sacfaraan wax dhib ah malaha.
 Waxa soo saaray Jamaacada oo dhan.
 Waxa soo saaray Muslim iyo ibnu Maajah.
 Labada shiikh ayaa isku waafaqay (Bukhaari iyo Muslim)
 Waxa soo saaray Axmed iyo Abudaa’uud.
 Tirmadi iyo Nisaa’i ayaa soo saaray.
July 23, 2016 at 4:37 PM Abdulaziz Salaada, Waysada iyo isdaahirinta Share via: